10 Izindawo eziningi ze-Epic Surf eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ukuhambela i-Iceland > 10 Izindawo eziningi ze-Epic Surf eYurophu
Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eDenmark, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba Portugal, Qeqesha Ukuhamba eScotland, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe, Ukuhambela i-Iceland
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi
(Kugcine ukubuyekezwa On: 09/07/2021)
Amabhishi anesihlabathi, ukubukwa kwamawa, amanzi acwebile aluhlaza okwesibhakabhaka, nemiphakathi emangalisayo yokuntweza olwandle, lezi zindawo ze-1o ze-epic kakhulu eYurophu zilungele abagibeli kuwo wonke amazinga. Kusuka ogwini lwase-Italy kuye eDenmark ekude, nePortugal, here are the top beaches for surfing in all of Europe.
1. Ibhishi laseGodrevy, England
Lapho isikhathi silungile, ungahle ugibele amanye ama-epic walling lefts namalungelo lapha. Yebo, Ibhishi laseGodrevy elise-Atlantic lingenye yezindawo ezinhle kakhulu ze-surf eYurophu. Kutholakala eCornwell, omunye amadolobha amahle kakhulu asogwini eYurophu, lolu lwandle luyintandokazi ngokuphelele emphakathini wama-surf.
Ibhishi laseGodrevy liyingxenye yeSt Ives Bay, nasehlobo, uzothola lapha abantu abaningi bendawo ku- namaholidi asehlobo. Kakhulu ukugeza ilanga, ukwakha izinqaba elangeni, noma ubabaza indlu yesibani, engazi ukuthi uGodrevy unikeza ezinye zeziqubu ezinhle kakhulu eYurophu.
Nini: entwasahlobo, Ephreli ngamagagasi ahlanzekile.
I-Amsterdam iya eLondon Ngesitimela
EParis eLondon Ngesitimela
IBerlin iya eLondon Ngesitimela
IBrussels iya eLondon Ngesitimela
2. Izindawo eziningi ze-Epic Surf eYurophu: IPeniche Portugal
Ihora ukusuka esikhumulweni sezindiza saseLisbon, indawo yesibili ye-surf ebabazekayo eYurophu ikulindile ePortugal. IPeniche empeleni iyisihlonhlo emaphethelweni asePortugal, okudala izimo ezinhle zamagagasi adumile unyaka wonke. Ngaphezu kwalokho, Amabhishi asePortugal amanye awo amabhishi aphupha kakhulu eYurophu.
Iphuzu elijabulisayo liyaqhekeka, izixhobo zamatshe esihlabathi, ngaphezu kwamabhishi amade amangalisayo, yenza iPeniche igibele izulu. Ngenkathi iPeniche iyisihlonhlo, kunezinhlobo ezingaphezu kuka 30 izindawo zokuntweza ngasogwini lwayo, nezindawo eziningi zokuqasha igiya lokushweza. Into eyodwa okufanele uyikhumbule ukuthi udinga i-wetsuit unyaka wonke, ngenxa yokushisa kwamanzi abandayo.
Nini: Septhemba kuya ku-Okthoba
Kuphi: UFoz do Arelho uyisihlabathi esimangalisayo esisenyakatho nePeniche sabaqalayo nobuhle, sibonga ukufinyeleleka kuhlu. Ifulegi eliluhlaza okwesibhakabhaka i-Supertubos yilapho uzogibela khona igagasi elidume kakhulu eYurophu, iyashesha futhi ithukuthele. Ngakho, ngaphandle kokuthi uyi-surfer onolwazi, leli gagasi lizokuthathela phansi kanzima.
Igagasi: 80 cm ukuze 2.6 m.
3. IBundoran, Ireland
Emabhishi agudle umhlaba, nemibono emangalisa yamawa kanye nogu ukuhamba, Isifunda saseDonegal singesinye sezindawo ezinhle kakhulu e-Ireland. Idolobha laseBundoran e-Ireland linenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuntweza olwandle eYurophu nge-surfer esezingeni eliphezulu kakhulu.
Bundoran is home to the most famous waves, inani eliphakeme. I-Peak ingakwesobunxele ngokuphelele, inamandla futhi imfishane. Ngakho, ngemuva kokugibela igagasi elifanele ungathatha iphenti enkantini yendawo, nabagibeli basendaweni.
Ukuze: ama-surfers athuthukile.
Igagasi: o.50 kuya ku- 2.7 m.
4. Izindawo eziningi ze-Epic Surf eYurophu: UKlitmoller, Denmark
Izikebhe zokudoba, abagibeli, futhi nolwandle olunesihlabathi luhlangana noLwandle lwaseNyakatho olukhuphukayo yisimo ozosibona eKlitmoller. Loluhlaka no izimo zezulu yikho okwenza idolobha elincane laseKlitmoller labizwa ngokuthi “Cold Hawaii”.
Ngaphezu surfing, IKlitmoller ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuphehlwa komoya eNyakatho Yurophu. Ngakho, ungakwazi ama-surfers agibele amagagasi unyaka wonke. Enye into emangalisayo ngeKlitmoller ukusondela kwayo kuThi esiqiwini futhi yayo iminyuziyamu, lapho ungathola khona ugqozi ngezinganekwane zeViking, ngaphambi kokubamba igagasi elihle.
Nini: unyaka wonke.
Kungani: izimo zezulu eziphelele, yabo bonke abashayeli bamashishi, unyaka wonke.
5. ILa Graviere Wave, Biarritz France
Amabhishi aseBiarritz ngamanye amabhishi aphukile eFrance, ingasaphathwa eyaseYurophu. Ngakho-ke, Akumangalisi ukuthi iBiarritz iyindawo edumile yokuntweza olwandle eYurophu. Igagasi leLa Graviere liheha abagibeli abasuka emhlabeni wonke baye e-Atlantique Pyrenee ekufuneni igagasi elihle.
Ngenkathi iHossegor iheha kakhulu izivakashi zeholide ngasolwandle, umphakathi we-surf lapha ungenye yezinto ezihamba phambili eYurophu. Ngakho, ungathola ukuqonda kumagagasi aphelele phezu kwekhofi nama-croissants avela kubagibeli abaseFrance. Ngaphezu kwalokho, Abaphathi baseHossegor uhambo lomhlaba wonke lwe-WSL umcimbi.
Ukuze: ama-surfers kuwo wonke amazinga nakuzo zonke izinhlobo zamabhodi.
Kungani: Ikhefu elijiyile lokubhishi lolwandle.
Nini: Ekwindla kuya entwasahlobo, kusukela maphakathi no-Okthoba idolobha liyavalwa, namagagasi afinyelela ku-epic la Grave. Ngakho, ungahlela uhambo lwakho lokuya kule ndawo ye-surf yama-epic, futhi uhlale emahhotela noma kumakharavani aqashiwe ngasogwini.
Usayizi we-Wave: 0.5 ukuze 2.5 m.
6. Izindawo eziningi ze-Epic Surf eYurophu: Isiqhingi saseLewis, Scotland
Lapho ukuvuvukala kwaseNyakatho kuhlangana khona ne-Atlantic, amagagasi amakhulu nemimoya enamandla, dala indawo enhle kakhulu yokuntweza eScotland. Isiqhingi saseLewis esiqhingini esixhunyiwe i-Atlantic Outer Hebridean singesinye seziqhingi kakhulu izindawo olunothile eScotland.
Ngakho-ke, I-Isle of Lewis yipharadesi lokuntweza olwandle, kodwa kuphela kuma-surfers asethuthuke kakhulu. Amagagasi anolaka akuwona awabaqalayo abasalwela ukugwedla nokungena kwesokunxele namalungelo.
Nini: ekwindla nasebusika.
7. Scheveningen The Hague, Abase Netherlands
Iwindsurfing, mfulafuthi, noma amalungelo okuntweza, IHague yindawo enhle yamaholide okusesha, nje a uhambo ngesitimela kude ne-Amsterdam. Noma kungabonakala njengesimo sezulu esimpunga futhi singamukeli, kepha kwabagibeli bama-surfers, kwakha izimo ezifanele zokugibela igagasi elihle.
Ungabamba ukuvuvukala kwesokudla kulo lonke ugu lwamakhilomitha ayi-11, ikakhulukazi ebhishi laseScheveningen. Lapha, uzothola ama-surfers kuwo wonke amazinga kanye nezitolo ezihamba phambili ze-surf nezinsiza.
ukuze uphethe, IHague yaziwa ngendima yayo kwezepolitiki emhlabeni, ingenye yezindawo ezinhle kakhulu ze-surf eYurophu.
IBrussels iya eAmsterdam Ngesitimela
London to Amsterdam With A Isitimela
IBerlin iya eAmsterdam Ngesitimela
EParis eya eAmsterdam Ngesitimela
8. Izindawo eziningi ze-Epic Surf eYurophu: San Sebastian, Spain
Emngceleni ophakathi kweFrance neSpain, Ezweni laseBasque, ISan Sebastian yidolobha elibi kakhulu lolwandle, ngezindawo ze-epic surfing. Lapha, uzobe weqa kusuka kumagagasi kuya kumabha we-tapas, bese siziphumulele olwandle olunesihlabathi kwelinye lamadolobha amahle kakhulu aseSpain.
ICantabria inamabhishi amahle nezindawo zokuntweza, njengolwandle lwaseZurriola, olwandle lokushweza olusekugcineni eSan Sebastian. Ilungele abaqalayo nabagibeli abaphakathi. Nokho, ukubukwa okuhle kakhulu, hlola amagagasi olwandle lwaseLa Concha.
Kungani: ukushiya okusheshayo ethekwini elivulekile.
Igagasi: ukugoqa okuhle-okuzungeze inyakatho-ntshonalanga ukuvuvukala.
Nini: Novemba kuya kuDisemba.
9. I-Watergate Bay eNgilandi, ISennen Cove
I-Watergate Bay yindawo yokuntweza e-UK, kanye namakhulu ama-surfers ahambela umqhudelwano kazwelonke wama-surfing wamaNgisi azovuma. I-Windsurfing ne-wave surfing zithandwa kakhulu lapha, okwenza iWatergate Bay ibe yinye ye- 10 izindawo eziningi zama-surfing eYurophu.
ISennen Cove eCornwell kungenye yolwandle obabazekayo nezindawo zokuntweza. ISennen Cove nePraa Sands yizindawo ezinhle zokuntweza ezinamabhishi amangalisayo.
Kungani: imimoya nokuvuleleka zilungele ama-surfers kuwo wonke amazinga.
10. Izindawo eziningi ze-Epic Surf eYurophu: Sardinia, Italy
Isiqhingi esihle sase-Italiya iSardinia sivala i- 10 izindawo eziningi zama-surf ezinhle kakhulu ohlwini lwaseYurophu, noLwandle iMedithera nolwandle olunesihlabathi. Lapha, ungabamba amagagasi amancane kuya kwaphakathi, noma amagagasi anamandla engxenyeni esentshonalanga. Ngaphezu kwalokho, nge 300 izinsuku ephelele, ISardinia yipharadesi lokuntweza olwandle.
Nokho, uma ufuna ukugibela ama-swic swells, bese uhlela iholide lakho lokuntweza eSardinia, kusuka ngoNovemba kuya kuJanuwari. ICosta Verde, IBuggero eSan Nicolo, futhi Porto Ferro e Alghero kukhona 3 of the beautiful and best beaches for surfing.
Nini: Septhemba kuya kuNovemba, noma ngoMashi kuya kuMeyi.
Igagasi: 3-4 m.
EMilan kuya eNaples Ngesitimela
UFlorence uya eNaples Ngesitimela
IVenice eNaples Enesitimela
IPisa eNaples Ngesitimela
Ngezinye Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ukuhlela iholide lokushweza elimangalisayo ku- 10 izindawo eziningi zama-surfing eYurophu. Uhambo lwesitimela oluya lapho uya khona kanye nekhaya eliyiphupho kude nasekhaya kuyindlela esheshayo futhi engabizi kakhulu yokuhamba.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Eziningi Eziyishumi Ze-Epic Surf EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fmost-epic-surf-destinations-europe%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha izilimi / fr ukuba / es noma / de nokuningi.
bestsurfingplaceseurope igagasi surfcampseurope Surfing SurfingDestinations surfingholidayineurope wave
Amathiphu Ukuze Western Europe ngu zemininingwane Ngo 2 Emaviki
Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
Yikuphi Are The Izitimela Esheshayo EYurophu Futhi Umhlaba
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba Portugal, Qeqesha Ukuhamba Spain, Isitimela Sokuvakasha Sweden, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
Yiziphi Izikhumbuzo Ozoziletha Ohambweni?
12 Ama-Cathedrals Athakazelisa Kakhulu EYurophu